सर्तै सर्तमा बर्षा नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित « Ramailo छ
सर्तै सर्तमा बर्षा नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित
नायिका बर्षा राउत नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भएकी छन् । तर एउटा सर्तमा । कस्तो सर्त त ? यो भिडियो हेर्नुस् :
बर्षाले बताए अनुसार मिडियामा सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा उनी नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भएकी हुन् । ‘मलाई प्रेस मिटमा पनि नबोलाउने भनिएको छ’, बर्षा सुनाउँछिन् । आखिर यस्तो सर्त नै सर्त राखेर बर्षाले खेल्ने यो फिल्म कस्तो होला त ? प्रतिक्षा गरौं ।बर्षा यतिबेला एउटा यस्तो प्रेम कहानी को छायाँकनमा व्यस्त छिन् । सम्भवतः बर्षा ‘जात्रा’को सिक्वेलमा दोहोरिनेछिन् ।
बर्षा अभिनित यस बर्ष दुई फिल्महरु प्रदर्शनमा आए । एकै मितिमा लागेका ब्लकबस्टर फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ र सुपर फ्लप फिल्म ‘मेरो पैसा खै’ मार्फत बर्षा दर्शकमाझ आइन् । यस्तै निर्माताको लगानी सुरक्षित गर्न सफल फिल्म मिस्टर झोले मा पनि बर्षाको अभिनय छ ।